डीआईजी सिंहलाई एआईजीमा बढुवा गर्न सिफारिस – Nepal's No. 1 Digital Newspaper
डीआईजी सिंहलाई एआईजीमा बढुवा गर्न सिफारिस
By डिजिटल खबर Last updated Dec 31, 2019 32 0
काठमाडौं, १४ पुस । गृह सचिवको अध्यक्षतामा रहेको बढुवा समितिले नेपाल प्रहरी अस्पतालको एआईजीमा आशा सिंहलाई सिफारिस गरेको छ । गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी अस्पतालकी प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) डा. आशा सिंहलाई प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) मा बढुवा गर्न सिफारिस गरेको हो ।
सोमबार गृह सचिव प्रेमकुमार राई अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव र प्रहरी महानिरीक्षक सदस्य रहेको समितिले सिंहलाई एआईजीमा सिफारिस गरेको हो । गृह सचिव राईको अध्यक्षता र प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव सदस्य रहेको बढुवा समितिको सोमबार बसेको बैठकले डा. सिंहलाई एआईजीमा बढुवा गर्न सिफारिस गरेको हो । सिंह वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ हुन् ।
अस्पतालको नेतृत्वका लागि डीआईजी मिनराज पाठक, डा. सिंह र डा. सुमनराज श्रेष्ठ प्रतिष्पर्धामा थिए । उनीहरु सबै १ पुस २०७५ मा डीआईजीमा बढुवा भएका थिए । यसअघि ३ पुसमा प्रहरी अस्पतालकी प्रमुख डा. दुर्गा थापाले अवकाश पाएकी थिइन् । त्यसयता एउटा प्राविधिक एआईजी पद रिक्त थियो ।
AIGDIGDigital KhabarNepalNepal PoliceNewsPromotionSarbendra Khanal
आइफोन एन्ड्रोइड फोन भन्दा १ सय ६७ गुणा असुरक्षित
सुनको मूल्य तोलामा ७३ हजार ५००